Umthandazo kwiAnglish Angel Azrael Inguqu Yokuguqula Ukufa
Unqulo & Umoya Famous Archangels
Thandazela Uncedo oluvela eAzrael, iNgelosi yokufa kunye noTshintsho
Ingelosi enkulu uAzrael , njengengelosi eyanceda neenguqu ebomini kunye nokuguquka kokufa emva kokufa, ndiyabulela uThixo ngokukwenza ube ngumhlobo onothando ukubanceda abantu bafunde utshintsho obalulekileyo ebomini babo.
Nceda undibonise iindlela ezithile uThixo angathanda ukuba nditshintshe ukuze ndikhule ukuze ndibe ngumntu ondifuna ukuba ndibe. Ukutyhila ukuba yeyiphi impawu engamelwe ndiyenze ukuze ndiyomeleze ngoncedo lukaThixo - njengokuba nesibindi , ukuvuya ngakumbi okanye ukuxolela .
Ndifundise indlela yokuhlakulela ezo mpawu ngokubanzi ngokutshintsha iingcamango, amagama kunye nezenzo endizikhethayo rhoqo.
Ndincede ukuba ndifumanise ngakumbi malunga neenjongo ezilungileyo zikaThixo ebomini bam , kwaye undikhuthaze ukuba ndizalisekise ezo njongo ngokubeka izinto eziphambili kwizinto ezizezona zinto kwaye ndisekelwe kwizigqibo zam kwizinto eziphambili. Ndikhokele ukuba nditshintshe yonke inxalenye yobomi bam - ebusweni bam kumsebenzi wam - ukuze ubonakalise oko kubaluleke kakhulu kwindlela kaThixo.
Xa iimeko zobomi bam ziguquka ngeendlela ezindibangela uxinzelelo , ndincede ndifunde nantoni na enokuyenza kwimingeni endikumele ndiphume nayo. Ndikhuthaze ukuthembela kuThixo kwimiba engingayiqondiyo, ndiyazi ukuba uThixo ubona yonke into esuka kumbono ongunaphakade, ongenamkhawulo kwaye into endivumela ukuba ndiyenze ekugqibeleni ifeze into ebalulekileyo ebomini bam. Ndincede ndivule ingqondo nentliziyo kwintsebenzo kaThixo kum, ngenguqu endiya kuyenza, ngoko ndiyakwazi ukuguqulwa ngazo zonke iindlela uThixo afuna ukuba nditshintshe kwaye zikhule.
Ndiphefumlele ukunceda abanye abantu ndibazi ukuba ngubani owenza utshintsho olukhulu ebomini babo kwaye ufuna inkxaso ngenkqubo.
I-Azrael, ndiyabonga ngokunceda abantu abasweleyo kunye nabathandekayo babo. Njengoko ndicinga ngento endiyikhumbulayo abantu endibathandayo abaye bafa, thuthuzela ngelixa ndibuhlungu kwaye ndincede ndiphilise ekubuhlungu ukuba ukufa kwabo kubangele ebomini bam.
Ndikhuthaze ukuba ndibeke ithemba lam kuThixo kwiindlela ezintsha xa ndikhumbula. Kwangathi singaphinda sihlangane ezulwini xa ixesha lam lidlula.
Xa ubomi bam bomhlaba buphela, nceda ndincede ndenze utshintsho emva kokufa ngaphandle kokwesaba . Ndiyongxongo ukuba ndiqale ngoku ngokuza ukwakha uhlobo lofa ndifuna ukushiya emva kokuba ndife, ngoko ihlabathi liya kuba yindawo engcono kuba ndihlala kuyo, kwaye uThixo uya kuvuya ngokukhetha kwam.
Ngamana ndihlale ndikhumbula ukuba iingelosi zikaThixo zinami njengoko ndihamba kuzo zonke iinguqulelo zokuphila, kunye nokufa, ukuzisa indlela yam. Amen.
Ingelosi Imithandazo: Ukuthandaza kwiNkulum- lengeli Jeremiel
Cube i-Metatron Cube kwi-Sacred Geometry
Iingelosi zithandaza: Ukuthandaza kuNyana oyiNtloko u-Uriyeli
Indlela yokwazi uMichael Michael
I-Chayot Ha Iingelosi Ezingcwele
Izimpawu ezibonakalayo zeNgelosi Ubungqina bukaRaguel
Indlela yokwazi i-Archangel u-Uriel
Indlela yokwazisa i-Archangel Haniel
Imiyalezo kaGabriyeli kwiiNkcazelo
Dibana no-Archangel, uSeraphiyeli, Ingelosi yokuhlanjululwa
Ingelosi Imithandazo: Ukuthandaza kwiNkulukazi yaseJophel
Iingelosi zithandaza: Ukuthandaza kwiNkulumkankulu uBharelel
I-Pliocene Epoch (5.3-2.6 yeMillion Years Ago)
Imixholo yophando ye-Econometrics kunye neengxelo zePhepha leKota
Ukubhala: Indlela yokunceda abantwana abaneengxaki zokubhala
Kutheni I-Chlorine Yongezwa Kwipompo Yamanzi?
Mohandas Gandhi, uMahatma
Kutheni Abadlali bePing Pong Basula izandla zabo kwiThebhile?
10 Amazwi ngoSimon Bolivar
Yintoni Inkcazo yoBuchule boBucala?
Uncedo loLwimi lweeNkcitho - Ukuthobela
Ukusebenzisana Ukusebenzisana Kwintetho
Ngaba 'i-Handicap' ne 'Index Index'?
I-Pro Golfer Ebenokubhenkceza Ngethuba Nge-US Open
Iingcaphuno zoKholo oluvela kwi-LDS ephezulu (Mormon) iinkokheli nabapostile
Uninzi Oludumileyo 16 Abadansi beXesha Elidlulileyo
Ndiyifake njani I-Painting eyenziwe kwi-Canvas?